bhimphoto: August 2010
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 7:59 PM3comments:
देउतालाई भाकल गरी चढाएको भन्दै छाडेको राँगोले आतंक मच्चाएपछि मंगलबार त्यसलाई मोरङको रंगेलीमा गोली हानी विभत्स तरिकाले मारिएको छ । सीमावर्ती भारतको सिक्टी घर भएका एक व्यक्तिले भाकल गरी देवतालाई भन्दै छाडेको रागो (भैसीको साँढे ) ले मान्छे र पशुलाई देखेर टाढै लखेट्दै आउँथ्यो । त्यसलाई देखेर केटाकेटी डराउँथे । अधिकांश समय त्यो राँगो रंगेली आसपासकै क्षेत्रमा घुमिरहन्थ्यो ।
मंगलबार बिहान ८ बजे त्यसले रंगेली-९ का अशोक साहको बाछोलाई लखेटीलखेटी हिर्काएर सख्त घाइते बनायो । त्यही पीरले केही बेरमै बाछो मर्‍यो । त्यसपछि आक्रोशित गाउँलेले राँगोलाई धपाए । प्रहरीसँग सहयोग माग गरे । जनधनलाई अप्ठ्यारो पारेपछि राँगोलाई मार्नु परेको मोरङका एस्पी दीपक थापाले बताउनुभयो ।
गाउँलेले लखेटेर रंगेली-२ स्थित सामुदायिक वन क्षेत्रको बक्राहा खोला किनारमा पुर्‍याएपछि पुगेको प्रहरी टोलीले त्यसलाई मार्न सात राउण्ड गोली चलाएको छ । पहिलो गोली त्यसको तीघ्रामा लाग्यो, ढलेन, बरू अघि अघि भाग्न थाल्यो । त्यसपछि थ्री नट थ्रीबाट प्रहरीले चार राउण्ड गोली चलाएपछि घाइते भयो । तैपनि मरेन । त्यसपछि गाउँलेले त्यसको टाउकामा बञ्चराले हिर्काए । अझै पनि मरेन । त्यसपछि बन्दुकको नाल त्यसको कानमा छिर्राई गोली चलाएपछि बल्ल बलिष्ठ राँगाको इहलीला सकियो ।चलाइएका गोलीमध्ये एउटा मात्र त्यसलाई लागेन । मिसफायर भएर खोलामा पुग्यो । गोली चलाउनका लागि जिल्ला प्रहरी प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेश लिइएको रंगेलीका प्रहरी निरीक्षक राजेश थापाले बताउनुभयो ।
(विराटनगरको उदघोष दैनिकको ०६७ साउन २७ अंकबाट साभार)
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 12:20 PM No comments:
एक हुल तन्नेरी छिरे । अँध्यारो थियो । अनुहार प्रष्ट बुझिने अवस्था थिएन । आइतवार बेलुकी ९ बजे । बत्ती थिएन । सोध्नै नपाइ उनीहरुले नै भने 'होटलबाट सेक्स काण्डमा पक्राउ परेका छन् नि । तिनमा एक जना हाम्री दिदी पनि परिछन् । खबर नछाप्ने आग्रह गर्न आएका हौ ।'
यतिखेर हामी विराटनगरस्थित एक स्थानीय अखबारको कार्यालयको छतमा थियौ । बिजुली गएको थियो । करीव ३७/३८ डिग्री अधिकतम तापक्रम । सबैतिर बाफ । त्यो साँझ प्रहरीले यहाँका शेरे पञ्जाब र यति भन्ने दुइ होटलबाट १० जोडी समातेको थियो । प्रहरीले सञ्चारकर्मीलाई कोठा नम्बर, समातिएकाको नाम मात्र उपलब्ध गराएको थिएन, तस्बिर पनि खिच्न दिएको रहेछ । संयोगले त्यो बेला म चाहि पुग्न पाएनछु । नभए अहिले तीमध्येका केही भद्र तस्बिर यहाँ राख्न हुन्थ्यो होला । समातिनेहरुमा संभ्रान्त भनिने केही परिवारका जिम्मेवार बुवा, तरुनी आमा र केही भारतीय थिए । एक भारतीय महिला पनि रहिछन् ।
विराटनगरमा पछिल्ला केही महिना यौनकर्मीका गतिविधि बढेको छ । यो पनि पेशा रहेछ । डर मान्दा मान्दै विस्तारै साँढे हुने प्रवृति मानवीय बानी हो । त्यसैले हुनुपर्छ रेस्टुराहरुमा मोडलजस्ता वेटरले काम गर्न थालेका । यद्यपि सबै रेस्टुराका महिला वेटर त्यसता छैनन् । अधिकांश सस्ता रेस्टुराहरुमा मदिरा र चुरोट पारखीका लागि छिल्लिएर जिस्किएको , काखमा बसेर चुरोट बालिदिएको देख्ता भद्र भन्न मन पराउनेका लागि अलि असजिलो दृश्य नौलो छैन । तर, भद्र भन्न मन पराउने बानी भएकाहरु त्यस्ता ठाउँमा पुग्नु नै आफैमा अभद्रता हुदै हो ।
व्यवसाय चलेको छ । सीमावर्ती क्षेत्रबाट भारु लिएर पस्ने र लरखराउदै फिर्ने ग्राहक तानिने भएपछि लिप्तहरु मख्ख छन् । सुरक्षानिकायलाई नजराना पुगेकैले हुनुपर्छ, प्रहरी मौन छ । तर, हिजो चाहि समातेछ । अघिल्लो साता यहाँको कलेज रोडस्थित सरस्वती गेष्ट हाउसमा इटहरीकी महिला मृत फेला परेकी थिइन । एउटा युवकले २ हजार दिने सहमतिमा ल्याएर श्रीमान श्रीमति भन्दै छद्म नाउ लेखाइ बसेका रहेछन् । विहान त्यो युवक छिटै हिड्यो । चेकआउटको समयमा पनि महिला बाहिर नआएपछि प्रहरीले खोलेर हेर्दा उनी पलंगमा मृत थिइन । मुखबाट सेतो फिज निस्केको थियो ।
श्रीमान वैदेशिक रोजगारीमा । नानीहरु छन् । उनको बाटो बिग्रिएको रहेछ । प्रहरीले घटनामा संलग्न युवकलाई समातेको छ । टाउको दुख्यो भनेपनि एउटा औषधि खुवाएको बताएका युवकले एकपटक संसर्ग गरेपछि विहान हेर्दा मृत देखेर डराइ भागेको प्रारम्भिक बयान दिएका छन् । सम्भवत त्यही घटनापछि प्रहरीले हिजो छापामारी गरेको हो ।
अब तातो छानो र ती युवा जमातका कुरा । उनीहरुले आफुहरु रंगेलीबाट आएको बताए । उनीहरुकी दिदी भनाउने महिलाका नानीहरु छन् । श्रीमान मोरङसगै जोडिएको अर्को जिल्लामा काम गर्छन् । अहिले घरमा छैनन् । परिवारका सबैलाई थाहा भयो भने मर्नु न बाँच्नु हुन्छ त्यसैले समाचार नछापे ठीक हुन्थ्यो भन्ने प्रस्ताव उनीहरुको थियो । हामीसँगै रहेका उदघोषका सम्पादकले भन्नुभयो 'हामी सस्तो पत्रकारिता गर्दैनौ । त्यसरी महिलाबारेमा स्पष्ट जानकारी आउनेगरि छापेर पत्रिका बेच्ने नियत हाम्रो छैन ।' उनीहरुलाइ भनियो - जानकारी प्रहरीले सबै पत्रकारलाई दिएको छ । तस्बिर लिएका छन् । रुमको नम्बरसहित जोडीको नाम उपलब्ध गराइएको छ । कहाँ कहाँ गएर समाचार नछाप्न आग्रह गर्नुहुन्छ ?
केहीबेर अकमकिएपनि उनीहरु एक ठाउँ गरेको आग्रह पुरा होस भन्ने चाहनामा थिए । उनीहरु गए । आज समाचार महिलाको पुरा परिचय खुल्नेगरि आएका छैनन् । प्रकाशनको यो तरिका ठीकै हो । तर, समाचारमा मात्र पर्दा लगाएर यस्ता कार्य निरुत्साहित हुने पक्कै होइनन् । कता जाँदैछ समाज ??
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 6:02 PM No comments:
हेर्न चाहे देखिन्छ पैतालामै देश
भेट्न चाहे भेटिन्छ ढुङ्गामै देश
देशप्रेम भावना हो, सम्हालेर राख्नू
मेट्न चाहे मेटिन्छ सीमानामै देश
वरिपरि हुन्छन् बैरी टाढा नखोज्नू
रेट्न चाहे रेटिन्छ गर्धनमै देश
सबैभन्दा माथि हुन्छ देश सम्झिनू
फेट्न चाहे फेटिन्छ कफनमै देश
अमर छन् सहिदहरु, मूल्य नतोक्नू
लेट्न चाहे लेटिन्छ रगतमै देश
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 4:40 PM No comments:
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 4:14 PM No comments:
सहकर्मीसँग बेलाबेला झर्को मानिरहेका रेस्टुराँ सञ्चालकको 'मुड अफ' हुनुको कारण आन्तरिक रूपमा बिग्रेको कुनै कामले थिएन । एक दशकदेखि यो पेसामा रहेका विराटनगर कलेज रोडका सुरेन्द्रलाल श्रेष्ठ भन्छन्, 'साउनभरि व्यापारमा मन्दी भएपछि कसरी मुड ठीक हुन्छ ? उनीजस्तै चल्ती रेस्टुराहरूमा साउन लागेपछि त्यसका 'साहुजी' का मुड बिगि्रएको देख्न पाउनु विराटनगरमा नौलो छैन ।
'साउनमै किन मन्दी ?' प्रश्नमा ताम्राकार कोल्ड सेन्टरका सञ्चालक पुरुषोत्तम ताम्राकार प्रस्ट्याउँछन्, 'धेरैले साउनमा माछामासु र रक्सी बार्छन्, धर्म गर्छन् । त्यसैले मन्दी हुने हो ।' उपमहानगरभित्र सानाठूला गरी तीन सयको हाराहारीमा मदिरा बेचविखन गरिने रेस्टुराँ छन् । अधकांशको अवस्था उस्तै छ । 'नियमित खानेमा पनि धेरै कोही बोलबम जान्छन्, कोही व्रत बस्छन्,' ताम्राकार भन्छन् । यो व्यवसायमा नगरमै पुरानामध्ये पर्ने उनलाई पछिल्ला केही वर्ष साउनमा ग्राहकै नहुने समस्या भने भएको होइन । ग्राहक छन् तर यो महिना पहिलेजस्तो बग्रेल्ती आउने क्रम रहँदैन । 'यो महिनाभरि सातामा दुई दिनका दरले मात्र व्यापार चल्छ भन्ने बुझे हुन्छ,' उनी अथ्र्याउँछन् । मन्दी आउने महिना भएकै कारण अरू बेला व्यस्त रहने रेस्टुराँ सञ्चालकले साउनभरि बोलबमको तीर्थयात्रा र अन्य काममा ध्यान दिन पाएका छन् ।
मदिराको थोक बिक्री कक्ष चलाएका कामना कोल्ड सेन्टरमा विनोद केसी पनि साउन महिनामा व्यापार घट्ने बताउँछन् । '५ वर्षअघिभन्दा साउनमा बार्ने केही घटेका हुन्,' उनी भन्छन्, 'तर, रक्सीमा साउनचाहिँ वर्षको एउटा यस्तो महिना हो जसमा मन्दी भएरै छाड्छ ।' उनका अनुसार साउनमा धर्मकर्म गर्नेेले खान छाडेर मात्र मन्दी आउने भने होइन । बर्सेनि असार अन्तिममा आउने बजेटमा मदिरामाथि राजस्व लगायतका करका दर वृद्धि भएर आउँछ । त्यो घोषणा अघि स्टक गर्ने प्रवृत्तिले पनि साउनमा मन्दी गराएको हो ।
उपमहानगरमा मदिराका डेढ दर्जन थोक बिक्रेता छन् । ठूला विक्रेतामध्येको रोविन टे्रड सेन्टर र कोसी सप्लायर्समा पनि सञ्चालक- कर्मचारीको भनाइ फरक छैन । रोविनका कर्मचारी गंगा दाहाल भन्छन्, 'साउनका व्यापार ५० प्रतिशत घट्छ । यो त बर्सेनि दोहोरिने पुरानो कुरा हो ।' उनका अनुसार बजेटले गर्ने राजस्व वृद्धिका क्रममा हुने फाइदालाई ध्यानमा राख्दै स्टक राख्न चाहनेले गर्दा पनि साउन प्रभावित हुने गरेको हो । 'धर्म एउटा कुरा हो तर बोलबमका नाउँमा मन्दी भन्न मिल्दैन,' उनले भने, 'चाहिने जति पहिल्यै किनेर राखेको रेस्टुराँले फेरि कसरी किन्थ्यो र ?'
कोसी सप्लायर्सका सञ्चालक सुरेशमान श्रेष्ठको बुझाइमा साउन मन्दी हुनुका पछि धार्मिक कारणसँगै स्टक राख्ने प्रवृत्ति बढी कारक हो । 'नभए अघिपछि पनि बिक्री राम्रो हुन्छ,' उनी भन्छन् । २ सय ५० प्रतिशतसम्म कर लिए पनि इजाजत लिई उत्पादित मदिराका लागि सरकारले ध्यान नदिएको उनको गुनासो छ ।
'नक्कली समातियो भने १० हजार तिरे छुटिहाल्छ,' उनी भन्छन्, 'फेरि थालिहाल्छ । त्यसले बजारमा पारेको अप्ठयारोलाई सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।' उनका अनुसार तराई क्षेत्र भएकाले बोलबमको प्रचलित तीर्थका नाउँमा नभई नहुनेमध्येका धेरै मदिरा सेवनकर्ता साउनमा एक महिनाका लागि छाड्ने गरेका छन् । चार/पाँच वर्षअघि साउनमा व्यापार नहुने अवस्था रहे पनि केही सुधार आएको छ ।
उपमहानगरमा ९० प्रतिशत बजार नेपालमै उत्पादित मदिराको हो । मोरङमै मदिराका तीन कारखाना छन् । आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुख टेकबहादुर खत्री भन्छन्, 'साउन भनेर मन्दी भनिहाल्न मिल्दैन । अरू महिनाले कभर गर्छ ।' उनका अनुसार कार्यालयले ०६६/६७ मा मदिराबाट १ अर्ब २० करोड राजस्व असुली गरेको छ । पैठारीबाट मात्रै ४७ करोड ७६ लाख ७५ हजार संकलन गरेको छ ।
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 4:45 PM No comments:
किसान व्यस्त छन् । गएको विहीवार विहान ८ बजे छाडेको विराटनगर दिउसो ४ बजे फेरि टेकेपछि मैले फेसबुकको स्टाटसमा यति मात्र लेखेको थिए । अमेरिका पुगेका एक जना सञ्चारकर्मी दाजु राजेश कोइरालाले कमेन्ट लेखे 'तैपनि चामलको भाउ घटेको थाहा छैन ।' एक जना साथीले उहाको प्रतिक्रियामाथि प्रतिक्रिया लेखे 'आफ्नु तलब बढाउनु । चामलको भाउ घटाउनु ।' उनले त्यसको जवाफमा फेरि लेखे 'किसानको के दोष र ? भाउ बढाउने धेरै फ्याक्टर छन् ।'
तीन शब्दको छोटो वाक्यमा प्रतिक्रिया थपिएको देखेर म फेरि त्यसमै लेख्न बाध्य भए । मैले थपे 'बढेको भाउ सोझै किसानले खान पाउने मुलुक होइन यो । भाउ बढाउने र बढेको खान पाउने बीचमा अरु नै छन् । वर्षाको सीजन हो, यतिखेर उनीहरु रोपाइमा व्यस्त छन् मैले भनेको हो । अन्यथा होइन ।
फेसबुकको एउटा सानो स्टाटस अप्डेटको श्रृङ्खलालाई यतै थाती राखौं । आफ्नो अवस्था बारे वा मन लागेका कुरा लेख्न मिल्ने इन्टरनेटको यो सामाजिक सञ्जालमा लेख्नका लागि जे चाहृो त्यही सम्भव छ । सम्पर्कमा रहेकाहरुले मात्र आफ्ना कुरा देख्ने भएपछि आफुले लेखौ वा अरुले लेखेका बाक्यमा प्रतिक्रिया दिउ, सजिलै सकिन्छ ।
विहीवार साझ मेरो स्टाटस चामलको बढेको वा घटेको भाउसग सम्बन्धित थिएन । यसको कारण थियो -तेतरियाका एउटा किसानसगको भेट । फोटोपत्रकार मित्र संजीव खनाल र मैले विराट चोकबाट विराटनगर फर्कदा बाटोबाट करीव २०० मिटर पर पूर्व खेतमा मधु साह नामका किसानलाई देखेका थियौ । ढाडमा स्पे मेशिनको पम्प भिरेर डढेलो लागेका धानका बोटमा उनी असिनपसिन हुदै स्प्रे गरिरहेका थिए । हामीले सडकमा बाइक अड्याएर उनको तस्विर लिने निधो गरियो । आली हिलाम्य थियो । जोगिएर उनीसम्म पुगियो । सोधियो 'किन स्प्रे । के भएको हो धानलाई ' उनले सहज उतर दिए 'डढुवा लागेको हो । हेर्नुस्न् , जोगिन्छ कि भनेर स्प्रे मारेको ।'
लगाएको धान रंजीत भनिने मन्सुली हो भन्ने उनले नै बताए । उनको एक बीघा र नजिकका धेरै किसानको खेतमा डढुवाले आक्रमण गरेको पनि सुनाए । हामीले सुन्यौ । तस्विर खिच्यौ । अनि फिरेर मोटरसाइकलसम्म आइपुग्दा एकजना साइकलयात्री पर्खिरहेका थिए । उनले हत्तपत नमस्कार गरे अनि भने 'हजुरहरु कृषिबाट हो । हेर्नुस्न मेरो पनि धानमा डढुवा लाग्यो । के औषधि हाल्ने थाहा छैन । लौ न भन्दिनुस् ।' उनको बुझाइ देखेर हास्न मन लाग्यो । हासिहाल्दा पनि असजिलो हुने । ढाडमा व्याग छ । हात हातमा क्यामेरा । उनले कृषिका प्राविधिक ठानेछन् । हतपत उनलाइ भनियो 'दाइ, हामीहरु कृषिका मान्छे होइन । हामी पत्रकार । त्यही डढुवाको फोटो खिचेर फिरेको ।' उनी केही भन्न खोज्दै थिए । तर, हामी अघि बढि हाल्यौ । बाटामा एक घण्टे झरीले छेक्यो । झोराहाटको पिडारवनी चोकमा ओत लागेर बसियो । मन ती दुइ मानो रोपेर मुरी फलाउनेहरुका कुरा खेल्यो ।
खेतीमा कछुवा गतिमा परम्परागत प्रविधि विस्थापित हुने क्रममा छ । कतिपय गराहरुमा ट्याक्टरले खनजोत गर्दै रहेको देख्न गाह्रो छैन । परम्परागत प्रविधि हटिहाल्ने अवस्था नहुनुका पछि किसानको उक्सिन नसकेको आर्थिक अवस्था हुदै हो । तर, किसानका माझबाट खरायो दौडेजसरी हाम्रा परम्परागत बीउबिजन हराएका छन् । सबैथोकमा हाइब्रिड हावी भएको छ । जनसंख्या,उद्योग र बढ्दो आवासका कारण जग्गा खण्डीकरण बढेको छ । जग्गाको आकार बढ्दैन । मान्छे र घरहरु बढ्छन् । त्यसैले सानो आकारको जग्गामा धेरै र छिटो फल्ने प्रविधिमा अघि बढ्न किसान दवावमा छन् । धेरै किसान काम गर्नका लागि मात्र किसान छन् । जग्गाधनी अरु नै र अन्तै छन् । जग्गाधनीको रुची र अवस्था अनुसार अर्को बाली लगाउने नलगाउने निर्णय हुन्छ ।
अनि हाइब्रिड । केही महिनाअघि मकैको घोघामा दाना नलागेपछि किसानहरुले प्रदर्शन गरे । सरकारले केही स्थानमा राहत दिने घोषणा पनि गर्‍यो । बाली लगाउनका लागि उन्नत प्रविधिको बीउ छनोट गरिन्छ भने त्यसका लागि जग्गाको अवस्थामा गरिनुपर्ने तयारीका मापदण्ड पनि भिन्न छन् । तर, बीउ उन्नत ल्याएपनि हाम्रा धेरै किसानले त्यस्तो प्रविधिमा अघि सरिहाल्ने अवस्था छैन । त्यसैले मधु साहजस्ता किसान पीडामा छन् । कृषिको व्यवसायिक विकासलागि नारावाजी र वकालत गर्नेहरुले बेलैमा सल्लाह दिए जाति होला । अन्यथा डढुवा हुने क्रम बढेर किसान फेरि प्रदर्शनमा उत्रिएमात्र हेर्ने प्रवृति हितकर हुदैन ।
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 7:05 PM No comments:
- डा. भरतराज सुव्वा
मौसम परिवर्तन हुने क्रिया लगातार भइ नै रहेको अवस्थामा पृथ्वीको तापक्रम बढेको तथ्यांक प्रकाशमा आएपछि यसबारे विश्वभर चासो बढ्दो छ । बैज्ञानिकहरुले पृथ्वीको तापक्रम बृद्धि हुनुको घटनालाई सबै कोणहरुबाट अध्ययन गर्दै आएका छन् । यसको असर जैविक वस्तुसँगै समुद्र, नदी, हिमाल आदिलाई पनि कसरी किन परेको रहेछ भन्ने तथ्य पत्ता लगाउन प्रयोगहरु गरिएका छन् । जाडो महिनामा पनि हिउँ पग्लने, एकातिर हिमताल र नदीहरुमा पानीको सतह बढेको घटनाहरु प्रस्तुत गरेका छन् भने अर्कातिर फूल्ने र फल लाग्ने बिरुवाहरुमा देखिएको समयको अन्तर आदिलाई पनि मौसम परिवर्तनको असर भन्ने गरिएको छ । सुखा मौसमले गर्दा पानीका मुहान सुक्ने, पिउने पानीको लागि हाहाकार भएका घटनाहरु हाम्रा सामु नौला छैनन् ।
वास्तवमा मौसम परिवर्तन गर्ने मूख्य कारक के हो यसमा कुन कुन अन्य कारणहरु सामुहिक रुपमा सक्रिय भएर आज सम्पूर्ण पृथ्वीको तापक्रममा परिवर्तनको हलचल ल्याउन सफल बन्न सक्यो । यो ज्यादै सोचनीय प्रश्न बनेको छ, हामी सबैका लागि । धेरै कारणहरु मध्ये बढ्दो जनसंख्या जसलाई गाँस-वासको व्यवस्था नहुनु, अनियन्त्रित तरीकाले जंगल फाडिनु, सिमसार सुकाइनु, औद्योगिकीकरण बढ्न युद्धमा वातावरण विनाश गर्ने किसिमका आधुनिक रसायनहरु र हतियारहरु प्रयोग गरिनु, प्रकृतिमाथि वेरोकतोक हस्तक्षेप गरिनु जस्ता मानव क्रियाकलापहरु धेरै हदसम्म मौसम परि्वर्तनका कारकको रुपमा खडा देखिएका छन् । शायद यी वाहेक अन्य धेरै अदृश्य कारणहरु प्नि हुन सक्दछन् जसलाई प्रष्ट व्याख्या गर्न गाह्रो हुन्छ ।
मौसम परिवर्तनका असर क्रमिक रुपमा सम्पूर्ण वनस्पति र जन्तुहरुमा पर्न जान्छ । सम्वेदनशील जीवमा असर तुरुन्त देखिने र अन्यमा विस्तारै देखिने मात्र हो । मौसम परिवर्तनको असर जलीय र थलीय कुनमा धेरै होला यो पनि एक विशेष अध्ययनको विषय बनेको छ । यसबारे पनि अनुसन्धान भइरहेकै छ ।
मैले विगत १५ वर्षदेखि नेपालमा पाइने शंखेकीराहरुको अध्ययन गर्दै आएको हुँदा हाल यसको अवस्था र विगतका दिनहरुमा रहेको अवस्थालाई तुलनात्मक अध्ययन गर्दा, जमिनमा पाइने धेरै थरिका शंखेकीराहरुको संख्या उल्लेखनीय तरिकाले घटेको पाइएको छ । यसो हुनुको मूख्य कारणहरु निम्न छन् । जमिनमा पाइने शंखे कीराहरु ओसिलो जमिनमा रहने र सुख्खा मौसममा माटोमुनि वा ढुंगार् इटा आदिमा लुकेर रहने गर्दछन् । समय समयमा पानी नपर्नाले जमिन धेरै सुकेर उनिहरुको शरीरमा रहेको पानी सुकेर मर्ने गरेको पाइएको छ । सायद यसै कारणले होला आगन्तुक लार्ज गार्डेन स्नेल -बगैंचे ठूलो शंखेकीरा) जुन हरेक बगैचाहरुमा प्रायः गरेर तराइको ओसिलो ठाउँहरुमा छरिएर रहेको छ । यसको संख्या वर्षेनी घट्दै गएको छ । यो ओसिलो ठाउँहरुमा बस्छ र बस्ने ठाउँ जलमय भएमा मर्छ ।
विराटनगरको प्राय धेरैजसो गल्लीहरुमा हिड्दा पोलिथिनको ब्यागमा शंखेकीरा पोको पारेर सडकमा राखिएको पाइन्थ्यो । त्यो दृश्य आज कमै देख्न पाइन्छ । बगैंचाबाट गल्लीमा फ्याकिएका शंखेकिराहरु प्रशस्त देखिन्थे । तर आज कमै देखिन्छ वा देख्न छोडिएको छ । मैले आफ्नै वगैचामा वयस्क शंखेकीराहरु वर्षा २०० देखि ३०० सम्म संकलन गर्थे र मार्थे । किनभने तिनले बगैचामा फुल विरुवा र तरकारी बालीलाई नोक्सानी गर्थे । तर यस वर्ष जम्मा ४ वटा मात्र भेटिनुलाई मौसम परिवर्तनको असर मान्नु पर्ने ठानेको छु । किनकी मैले मेरो बगैचामा कुनै कीटनाशक औषधी पनि प्रयोग गरेको छैन । यसरी नै अन्य ठाउँहरुमा सुख्खा मौसमले गर्दा धेरै मरे । बाँचेकाहरुले पनि सन्तान उत्पादन गर्ने मौका पाएका छैनन् । किनकी उनीहरुको वासस्थान अतिवृष्टिका कारण जलमय भएको छ ।
यसरी नै चुरे पहाड, तर्राई र महाभारत पहाडका फेदीहरुमा स्थानीय जातका जमिनमा बस्ने शंखेकीराहरु प्रशस्त पाइन्थे । तर हाल सुखाका कारणले धेरैजसो ठाउँहरुमा देखा पर्न छाडेका छन् । यतिमात्र नभएर एप्पल स्नेल जसलाई डोका भन्ने गरिन्छ, तराइवासीले यसको संख्या पनि अत्यन्तै घटेको वताउछन् । मोरङका आदिवासीका अनुसार सिमसार मासिनुको साथसाथै डोकाको संख्या पनि उल्लेखनीय तरीकाले हराउदै गएको छ ।
यस्तै अवस्था छ, जमिनमा पाइने शंखेकिराको, अरु ठाउँहरुमा पनि । यस्तै गरि सिमसार वा पोखरीहरुमा पाइने कछुवा जो जाडो छल्न जमिन भित्र लुक्दछ । सात/आठ महिनासम्म पानी नपर्नाले जमिन बाहिर आउन नसकि मर्ने गर्दछन् ।
कछुवाको संख्या घट्ने कारणमा मौसम परिवर्तन एक कारक बनेको छ । पानीमा पाइने माछा लगायत अन्य कीराजन्य जीवहरु पानी कम हुनाले वा पानी सुक्नाले सखाप हुँदै गइरहेको छ । निकट भविष्यमा मौसम परिवर्तनले विकराल समस्या ल्याउने छ । यसलाई रोकथाम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरु भएका छन् । यसबारे धेरैले चासो देखाएका छन् । तर जबसम्म जनचेतना अभिबृद्धि हुँदैन तबसम्म रोकथाम गर्ने सोचले सोचमै पूर्णविराम लिएर रहने छ । हरेक राष्ट्रले मौसम परिवर्तनलाई रोकथाम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय नीतिको साथसाथै राष्ट्रिय र क्षेत्रीय नीति पनि बनाइनु पर्छ र कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल राष्ट्रमा देखिएका राजनीतिक समस्याहरु अल्पकालिन हुन् तर मौसम परिवर्तनले ल्याउने समस्या सुल्झयाउन त्यति सहज हुनेछैन र त्यसको असरले जीवहरुलाई लोप नै गराउन सक्दछ । समयमा ध्यान नपुर्‍याएमा मानवले धेरै कष्टदायी समय व्यतित गर्न तत्पर हुनुपर्ने समय आएको छ ।
हाल भइरहेको कुनैपनि वस्तुहरुको महत्व नबुझेर नाश गरी तिनीहरुलाई पुनःस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्न, विवेकशील मानवको कर्तव्य कदापी हुन सक्तैन । हाम्रो विवेकलाई सही ठाउँमा समयमै प्रयोग गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो । समयको आगमनलाई स्वागत गर्नुपर्ने समय आएको छ । हामी सबैको समझदारीमा हामी सबैका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण कदम रहने छ - मौसम परिवर्तन गर्ने हाम्रो क्रियाकलापहरुलाई न्यूनीकरण गर्नु ।
मौसम कसरी बदलिँदै छ, र यसका असरहरु कुन कुन वस्तुहरुमा देखिदै छन् । यसको अल्पकालीन र दीर्घकालिन असरहरुले मानवमा कस्तो असर पार्छ - यसबारे जनचेतना जगाउने मात्र होइन, मौसम परिवर्तनलाई सहयोग पुग्ने जुनसुकै योजना भए पनि रोक्न सरकारले पहल गर्नुपर्छ ।
content catagory जैविक विविधता, पाहुना कलम